Dowladda Iran oo Ka digtay khatarta ka dhalan karta heshiiska dhex maray Israel iyo UAE. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Dowladda Iran oo Ka digtay khatarta ka dhalan karta heshiiska dhex maray...
Dowladda Iran oo Ka digtay khatarta ka dhalan karta heshiiska dhex maray Israel iyo UAE.
Madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani ayaa sheegay in tallaabada ay qaadday dawladda Emirate-ka oo ay ku sheegtay in ay xiriir la yeelanayso Israel ay tahay arrin khatar ku ah dalalka islaamka ee ku yaalla bariga dhexe.
Iran waxaa ay intaa ku dartay in ay meesha ka muuqato khiyaano iyo lugooyo lala damacsan yahay shacabka reer Palestine iyo qadiyadda difaaca dhulka Palestine, laguna doonayo in dhabarka laga jabiyo awoodda iyo wada jirka shacabka reer Palestine.
Hassan Rouhani wuxuu sidoo kale sheegay in dawladda Iran ay ka digayso khatarta ka dhalan karta heshiiskaas, isla markana uu dawladda Emirate-ka u sheegayo in aysan u suurta geli doonin gudaha dalalka bariga dhexe iyo dalalka islaamka inay ku dhex furto qadiyadda Israel, isla markaana ay muhiim tahay inay ogaato falcelinta ka imaan karta dalalka islaamka ee bariga dhexe inay fashilin doonto heshiiskooda.
Previous articleDFS oo dalka kusoo celisay maxaabiis ku xernayd Tanzania. “Sawirro”
Next articleMadaxweyne Farmaajo: “Wixii kasoo baxa shirka Dhuusamareeb waxaan la wadaagayaa Baarlamaanka”+Sawirro.